Ciidamada Tigreega oo Ceelbarde ka kaxeystay dad lagu eedeeyay wiilkooda in ay kamid yahay Xubnaha Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. | Halganka Online
Ciidamada Tigreega oo Ceelbarde ka kaxeystay dad lagu eedeeyay wiilkooda in ay kamid yahay Xubnaha Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Ciidankii Tigreega ee shalay soo galay degmada Bardaale ee gobolka Bakool isla markaana ku hubeysnaa gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay in ay dib kaga gurteen iyagoona ku sugan duleedka degmada, waxaana ay deegaankaasi kala baxeen tiro dad isku qoys ah oo ay ku eedeeyeen in wiilkoodu uu kamid yahay xubnaha Mujaahidinta Al-Shabaab.
Warar xog ogaal ah ayaa sheegaya in haraadiga Maleeshiyaadkii laga eryay Bay iyo Bakool sanadkii hore ay gaarsiiyeen Ciidamada Tigreeda in Ceelbarde ay joogaan saraakiil sarsare oo kamid ah Shabaabul Mujaahidiin kuwaasi oo weeraro Milatari qorsheynaya sidaasina ay Ciidamada kusoo galeen deegaankaasi.
Xuseen Aw Nuur oo kamid ah dadkii jooga Ceelbarde xilligii ay Tigreedu soo galayeen ayaa ku waramay in ay abaareen guri ku yaalla deegaankaasi oo ay ka raadinayeen nin loo maleynayo Al-Shabaab in uu katirsan yahay, laakin ay ka waayeen waxaana taasi badalkeeda ay kaxeysteen xaaskiisii iyo 3 wiilashiisa ah oo uu dheer yahay nin ay walaalo yihiin.
Maleeshiyaadkii la socday Tigreeda ayaa dadka deegaankaasi su’aalo badan ka weydiinayay Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo dhaqaaqooda laakin dadka oo aad u baqanayay ayaan ogeyn wax ay u sheegaan maleeshiyadaasi ku jactaday soohdimaha Itoobiya.
Degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool ayaa ah deegaan xuduudeed ay mar waliba kusoo foofaan Ciidanka Tigreeda, sidaasi oo ay tahayna kuma sii sugnaadaan xilliyada ay soo galaan iyagoo ka baqanaya weeraro halkaasi looga soo maleego gudaha dalka Itoobiya.
« Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose oo maanta 500 neef oo xoolo ah ka qeybisay degmada Janaale oo la siiyay dadka Masaakiinta ah. Ilo wareedyo: DKMG ah taag uma heyso dagaal adag, waxaana dillooday dhaqaalo la’aan iyo maamul xumo. »